CHERRY: NOOCYO UGU WEYN - CHERRY
Cherry waa subgenus ah ee dhirta ee cirifka Plum ka soo qoyska Pink. Waqtigan xaadirka ah, jinsiyadu waxay jarjar gooyey ah jeeriga iyo jeeriga, taas oo lagu tilmaamayo iska caabin u dhaxaysa dhaxan iyo cudur, iyo sidoo kale xaddiyo badan oo miraha ah. Kala duwanaanshaha ugu weyn ee jeeriga waa Miracle Cherry.
Ma taqaanaa? Gerrigii ugu horeeyay ee laga soo bilaabo Aasiyada Yar-yar ilaa Rome waxaa soo saaray taliyaha iyo milkiilaha addoonta Lucull.
Kala duwan Ukran helay helay natiijo ka soo gooyay Kiev-19 iyo noocyo Lyubskaya, hybrid ee cherry iyo cherry macaan. Kuwa aasaasiga ah ee kala ah N.I. Turovtsev iyo V.A. Turovtseva. Cherry Cherry waxay leedahay midho cufan oo waaweyn, taas oo ah muxaadaro ah ee kala duwan. Geedka koraya oo qiyaastii 2 m sare ah, oo leh cufnaanta cufan ee la isku qurxiyo iyo laamood. Miraha Cherry A miro-ballaaran oo miro-guduud ah, mugdi-madow-cas oo miisaankeedu yahay 15 g la kulmaan dhuuban, diirka iridda, si fudud u saaraa, oo hilib udgoon, oo leh dhadhan dhanaan-macaan iyo lafta dhexdhexaad ah.
Isteroberiga u bislaadaan dhamaadka Juun, ka muuqan on laamaha laamaha. Fruiting ee geedaha sarreen ah waxay dhacdaa 3-4 sano ka dib markii laga beerto. In xajmiga miraha, noocyada kala duwan waxay ka badan tahay kaliya oo kala duwan oo ah cherry madow.
Kala duwanaanta Cherry. Kulanku waa qayb ahaan is-rogay, pollinators waa Minx, Samsonovka. Ilaa 25 kg oo miro ah ayaa laga goyn karaa geed weyn oo weyn.
Waa muhiim! Miro khudradu waxay ka kooban tahay asiidh dabiici ah, walxaha raadraaca iyo macruufiyeyaasha iyo walxaha pectin.
Kala duwan waxaa lagu gartaa dhaxan iyo dulqaad abaarta, waxay u adkeysan karaan ilaa -25 ° C. Ma jirto khatar ah in la gooyo moniliasis iyo cocomycosis. Cherry Encounter waa mid aad u caan ah ee bannaanka u ah tayada sare ee berry, caabbinta cudurada fungal, kartida gaadiidka wanaagsan.
Geedku wuxuu jecel yahay loamy ama ciid dabacsan, kaas oo gacan ka geysanaya horumarka wanaagsan ee geedka. Cherry waa mid fudud-u baahan, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad doorato meelaha si fiican u dillaacsan oo iftiin leh.
Ka dib markii laga beerto, dhulalka dhulku, sidaa daraadeed xididka qoorta waa in yar oo ka sarreeya heerka carrada. Waa lagama maarmaan in la sameeyo nasasho ku wareegsan qashinka si looga hortago in biyuhu ka faafaan xuduudaha wareegga geedka. Ka dib markii laga beerto waxay u baahan tahay waraabin badan ee 3-5 maalmood, mulch ciidda leh peat ama humus.
Mid ka mid ah noocyo of jeeriga ballaaran. Geedaha kala duwan, geedku wuxuu gaari karaa dhererka 7 mitir, taajku waa ovalaha iyo cufan, oo si ballaaran u faafaya. Jilifku wuxuu u eg yahay cirifka iyo lafaha cagaha iyo dhajinta yar yar. Warshadu waxay leedahay caleemo madow, cufnaanta iyo xitaa, cagaarka cagaaran, caleemaha ukumaha ah, caleemaha ukumaha ah ee muuqda, ubax muuqda kobaca hal sanno, oo lagu soo ururiyey inflorescences of 4 gogo kasta, miraha yihiin miro badan oo guduud ah oo dhar guduudan leh maqaarka khafiif ah, dusha si siman lafta, oo si fudud loo kala sooco.
Jirka hilibka jilicsan Buundada waa midab casaan ah oo casaan ah, oo dhadhanka macaan iyo dhadhankiisu waxay keenaan sonkor yar oo hooseeya. Geedka canabkuna wuxuu bilaabmaa inuu midho u dhasho sanadka saddexaad. Wax-soosaarka noocyada kala duwan waa heer sare, celcelis ahaan 45-50 kg.
Kala duwan waa jiilaalka-adag iyo abaarta u adkaysta, laakiin burooyinkeeda iyo ubaxyada ayaa aad u nugul qabow. Cadaadiska cudurada fangasku waa mid sareeya. Rugaha ugu fiican waa Wonder Cherry iyo Samsonovka noocyo ama noocyo cherry Valery Chkalov.
Ma taqaanaa? Cherry waxay u timid Ruushka iyada oo loo marayo Byzantium horaantii qarnigii 13aad. Mid ka mid ah noocyada ugu caansan - Vladimirskaya weli weli foomka waalidka ee Beelaha la abuuray.
Wixii horumarinta habboon ee cherry Toy waa lagama maarmaan ilaali farsamooyinka beeraha soo socda. Goobta soo degta - kor u kac, oo leh iftiinka qoraxda iyo hawada hawada ee fiican. Marka xulashada noocyo wax soo saar leh, dareenka waa in la siiyaa awoodda si fiican loo aaso.
Looma baahna si sax ah u samee taajka, ma ilaawin in noocyada kala duwan ee caleemaha qoyan ay ku dhacaan caleemaha sannadlaha ah. Dhaqankan waxa uu u baahan yahay carrada iftiinka iftiinka dhexdhexaad ah ee ku yaal meel ka baxsan aquifer. Noocyo Oxidized leh liming.
Wixii samaynta iyo khafiifinta ee taajka, iyo sidoo kale si loo soo saaro laamaha la saameeyey waa la gooyaa. Ka ilaali jirridda qorraxda Waxaad sameyn kartaa, cadeyn kartaa ama ku duub warqadda cad.
Bilowga jiilaalka samee dharka xididka lakabka oo dhererkiisu yahay ilaa 10 cm oo lagu daaweeyo peat. Cherry Toy uma baahnid waraabin badan, celcelis ahaan hal xilli xilli ilaa 9 baaldiyaal ah ayaa lagu shubay geed kasta intii uu socday ubax, Bisaylkiisa ugxan, dhammaadka beergooyska, marka la diyaarinayo jiilaalka.
Goobta isbeddelka cimilada caadiga ah ayaa gacan ka geysta dabacsanaanta iyo foornada. Sida tallaabo looga hortagi karo cayayaanka, dhirta waxaa lagu daaweeyaa sunta cayayaanka, iyo si looga hortago jiirka, waxay xirxiraan jir iyo silig cufan.
Helitaanka by cherry cherry leh cherry. Berry weyn oo miisaankiisu yahay 8 g oo ah qaabka wadnaha oo qaab qurux badan leh oo ficil ahaan aan dillaacin. Geedaha duurjoogta ah waxay bilaabaan inay midho dhasho sannadkii shanaad, sannad kasta beergooysku waa qiyaastii 50 kg. Kala duwanaanta Cherry Walaashu waa mid aad u kulul, waxay u adkeysan kartaa heerkulka ilaa -30 ° C. Sidoo kale, jeeriga aan khatar u ahayn cocomycycosis, waa sahlan tahay in la qaado, miro ayaa lagu kaydiyaa heerkulka qolka qiyaastii + 20-22 ° C 2-3 usbuuc, iyo qaboojiyaha wax ka badan hal bil.
Bisaylkiisa miro wuxuu dhacaa dabayaaqada Juunyo - horraantii Luulyo. Noocyada ugu fiican ee rinji-ka ah ee kala duwan ayaa noqon doona Donchanka, Drogana jaalle, Valeria, Annushka, Aelita.
Noocyada Nochka waxaa la dhigay bred at Donetsk Khasaaraha ah ee Horticulture by breeder L. I. Taranenko iyadoo la isticmaalayo habka loogu talagalay polled lacag la'aan ah ee jeeriga Star iyo Valerian Chkalov kala duwan cherry. Cherry Nochka waxay leedahay sifooyinka kala duwan ee soo socda: wuxuu leeyahay iska caabinta jiilaalka sare iyo caabbinta cudurada. Ripens dhamaadka Juun, berry waa weyn, casaan mugdi ah, jidhka guduudan iyo jilicsan dhadhanka macaan, miisaanka ilaa 7 g, oo si ballaaran wadnaha-qaabeeya, dhuuban on dhinacyada. Faa'iidada ee kala duwan waa dhalidda sare - ilaa 70 kg.
Waa muhiim! In lafaha geedka waxaa ku jira saliid fathi, saliid asturan iyo glycoside amygdalin, ee caarada - tannins iyo coumarin.
Madow waa weyn
Waxyaabaha kala duwan ayaa lagu soo rarey goobta agagaarka beerta ee Rossoshansky zonal A. A. Voronchikhina natiijada ka soo gudbidda noocyada Zhukovskaya iyo macaamiisha madow.
Geedka waxaa lagu gartaa xoog dhexdhexaad ah ama daciif ah, oo aan ka badnayn 3-4 m dhirta, taajku waa broad-pyramidal ama oval. On jirridda, jilif waa cawl-madow, geedaha yar yar waxay leedahay midab madow mugdi ah, oo leh lalab caag ah. Kala duwanaanta Cherry waxay leedahay caleemo toos ah, internodes dheer, ilkaha-cagaarka hore, iibsanaya lakab lacag oo da '; saxanka caleenta ee qaabka laftirka ah, sare on midab madow mugdi ah, hoose - cagaaran grayish; petioles ilaa 2 cm dheer, halkii cufan, ballaaran, ubax ballaaran-qaabeeya of hooska shimbir, badanaa saddex ubax ee inflorescence.
Miro ee size weyn, oo miisaanka ku saabsan 6 g, hooska maqaarka waa ku dhowaad madow, jidhku waa cherry madow ee midabka, xididdo cad, jilicsan, dhadhanka waa mid macaan oo macaan oo dhanaan leh. Cherry Black waa mid weyn, midho isku-dhafan, sharaxaad ka duwan ee kala duwan waxaa la sheegay in pollinators wanaagsan ee waa noocyo kala ah Kent iyo Griot Ostgeymsky.
The berry u bislaadaan horraantii July, fruiting ee geedaha bilaabmaa sanadka saddexaad ka dib markii beerto, dhalidda waa mid aad u sarreeya - ilaa 30 kg. Dhibaatooyinka noocyada kala duwan waxaa loo aaneyn karaa niyadjab iyo u nugulaanshaha coco-shinge iyo moniliosis, haddii uu ahaa roobab inta lagu jiro ubax, u-qalabkiisa - caabbinta barafowga -32 ° -34 ° iyo sarreeyaha sare.
Kala duwan ayaa waxaa la dhigay bred by Koch 90s ee qarnigii XIX ee Jarmalka adoo gudbiya kala duwan Griot Ostheims iyo Lotovaya.
Geedkan xooggan, oo gaadhaya dherer ka badan 5 mitir, sameynta hareer leh, oo leh waqti taarikada caleenta ah. In cherry Podbelskoy caleemaha - koraya, caleemaha - cagaar weyn oo dhoobo, matte. Ubax ee Cherry Podbelskaya waa weyn, galaas-qaabeeya, ka kooban 4 mid kasta oo inflorescence ah, oo leh tufaax xoqan. Miraha waa weyn, casaan mugdi ah, ku dhowaad madow, qashir xoqan oo casaan leh, dhadhan wanaagsan oo casri ah iyo cabitaan xoogan oo casiir iyo lafo dhexdhexaad ah. Dhirta qallalan ee geedaha waxay bilaabmayaan sanadka afaraad ka dib marka la beero, kororka dhalidda ayaa si tartiib ah u socda. Kobcinta hore ee dhexdhexaadka ah badhtamaha June.
Maadaama ay kala duwan yihiin is-kiniin-la'aan, pollinators ugu wanaagsan ee hore waxay noqon doonaan Ingiriisi Hore, Anadol. Wax soo saarka noocyada kala duwan waxay kudhisan tahay celcelis ahaan 50-70 kg. Kala duwan ma kala duwan yihiin hardiness jiilaalka, ee ku hari jiilaalka inta badan barafoobin, guga ubaxa iyo burooyinkeeda xanuunsado.
Cadaadiska cudurada fungal iyo caabbinta kulaylka - dhexdhexaad ah. Gobollada koonfureed ee leh qaboobaha khafiifka ah ayaa ku habboon noocyada kala duwan, cimilada qaboobaha waxay ku jiri doontaa gubasho iyo fadhiisin. Dabeecadeeda, noocyada kala duwan waa pentaploid leh tayada dhadhanka wanaagsan ee macmacaanka iyo farsamada. Cherry weyn macaan, tani waa qaabka ugu weyn ee kala duwan.
Cherry Miracle Cherry wuxuu leeyahay miro waaweyn oo weyn (illaa 10 g), taas oo 1.5 jeer ka badan celceliska celceliska macaan, iyo hilibka sare. Berry waa guduud mugdi leh, jilicsan, jilicsan iyo diirka si fudud loo kala soocay, waxay u muuqataa mid aad u badan sida cherry macaan, dhadhanka macaan iyo macaan-macaan. Cherry Miracle Cherry leeyahay sharaxaad soo socda: Waxay leedahay caabbinta cudurrada sarreysa, waxay u dulqaadaneysaa abaar, kuleyl iyo heerkul hooseeya. Inta lagu jiro ubax, Mirage, Raisin, Totem iyo Epic ayaa si fiican ugu pollole leh jeeriga. Laakiin waa in aan loo isticmaalin sida pollinators of kala duwan Drogana huruud ah, Farewell iyo Valery Chkalov.
Cuntada ka soo farcankii kala duwan ee Cherry Vladimirskaya V. Morozova. Dhirta dhexdhexaad ah leh geed leh caleemo caleen dhexdhexaad ah oo fidsan. Miraha badanaa ku jira koritaanka sanadlaha. Caleemaha kala duwan ee dessert Morozova waxay leeyihiin caleemo waaweyn oo caleemo qoyan, qoyan, diidmo dhir ah, dherer dhexdhexaad ah caleemaha cagaaran, caleemaha cagaaran, ubaxyo casaan ah oo casaan ah, miro yar oo wareegsan oo miisaankeedu yahay 5 g oo leh dhumuc dheer iyo lafo celis, macmacaanka macaan, dillaacaan tobanka sano ee labaad ee Juun.
Muuqaalka muuqaalka noocan ah ee cherry waa fruiting ee miraha waaweyn. Waxay billaabmaysaa inay midho u dhasho sanadka saddexaad, dhaliddu waa qiyaastii 50 c / ha. Kala duwan ayaa qayb ahaan ka mid ah is-bacrin, ugu wanaagsan ee Giorot Ostheim, Vladimir, Student. Faafin by gooyn cagaaran. Gooyooyinku waxay ku lug leeyihiin yaraynta laanta liicinta. Kala duwan waa jiilaalka-adag, abaarta u nugul dhexdhexaadka ah, oo aan halis ugu jirin helitaanka methocycycosis.
Laga helay sababtoo ah pollination lacag la'aan ah Novodvorskaya kala duwan by taranka Syubarova iyo Sulimova. Imtixanaadka gobolka ilaa iyo 2004 Geedo xoog leh leh taajkii dhexdhexaad ah. Noocyada Wyanok waxaa lagu gartaa maroon dhexdhexaad ah, miro yar yar (ilaa 4 g) oo leh lafo celcelis ahaan, casiir badan oo casaan mugdi ah iyo miro macaan iyo macaan.
Soo gelida isbeddelka sannadka saddexaad ka dib marka la beero, miraha waxay u bislaadaan dhammaadka Juun. Vianok kala duwan waa is-bacrin, sarreysa sare (13 t / ha), baraf u adkaysta, waxay muujinaysaa iska caabin dhexdhexaad ah ee loo yaqaan 'cocomycosis' iyo moniliosis.
Bred Breeders Turovtsev oo ka tirsan Machadka Cunto-dhirta. M. Sidorenko by kala duwan ee kala duwan Samsonovka iyo Kievskaya-19.
Geedka Shalunya waa mid dhexdhexaad ah, oo leh caarad cufan oo ciriiri ah, jilif cawl-madow ah oo diiriya iskudhafka, caleemaha cufan oo cufan leh oo leh cantoobo cufan oo badan. Caleemaha Cherry waa mid dhexdhexaad ah, muraayad, cagaaran dhalaalaya oo midab leh, oo leh dhalaal dhalaalaya iyo petiole gaaban. Fruiting - on laanta backa iyo koritaanka hal sano ah. Xayawaanka Berry waa guduud mugdi ah, ku dhowaad madow, leh dhibco yaryar oo caato ah iyo maqaar cufan oo si sahlan looga saari karo, ballaaran, hal dhinac, culayskoodu yahay ilaa 6 g iyo asliga ah oo ku saabsan 43 mm. Jirka waa burgundy, dhadhanka jeeriga waa macaan oo nadiif ah, lafta waa yar yar oo bilaash ah. Miraha ku bislaadaan heerkul sarreeya 20-ka juun.
Minx Cherry waa mid is-bacrin ah, pollinating noocyo kala duwan Chernokorka, Samsonovka, Vinka. Fruiting wuxuu bilaabmaa 3 sano kadib markaad beerto. Celceliska dhalidda waa 40 kg geedka. Kala duwanaanshuhu waa mid muhiim u ah caabuqa cudurada fangas, abaarta iyo heerkulkiisu hooseeyo (waxay u adkeysan karaan ilaa -25 ° C).